ှုSay thank you to SUPHAYALAT ….all ladies | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Cultures »ှုSay thank you to SUPHAYALAT ….all ladies
ှုSay thank you to SUPHAYALAT ….all ladies
Posted by fatty on Oct 20, 2010 in Cultures | 8 comments
thank you suphayalat
တကယ်တန်းကျတော့ မြန်မာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာမှာ ယောကျာင်္းတယောက်ဟာ လက်ရှိဇနီးတယောက်အပြင် နောက်ထပ်ဇနီးမယားတယောက် တရားဝင်ယူခွင့်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
မယားပြိုင်ပေါ့ ။ ဟာသလုပ်ပြီးပြောကြရင်တော့ … လက်ရှိ ဇနီးသည်ကို ရာထူးတိုးပေးလိုက်တယ်ပေါ့။ အိမ်ထောင်သယ်ဇနီးများ ယောကျာင်္းသားနဲ့ရင်ဘောင်တန်းပြီးလုပ်ငန်းခွင်
၀င်နေရသူများ … မကြာမကြာပြောတတ်ကြတာက …. ဒီမှာ ..ရှင့်လစာနဲ့လောက်လို့လား … ရုံးအလုပ်ကတဖက် ..အိမ်အလုပ်ကတဖက် ..ရုံးမှာကလည်း လုပ်လိုက်ရတာ ..
ဦးနှောက်ကိုခြောက်လို့ … အိမ်ကျလဲနားရမလားအောင့်မေ့တယ် … စားဘို့သောက်ဖို့စီစဉ်ရတာနဲ့ .. တနေ့နေ့ ဘာချက်ရမလဲစဉ်းစားရတာနဲ့ ………..။
အစရှိသဖြင့် … ပူညံပူညံမကြာခဏကြားရတတ်ပါ၏။ အဆိုပါ ဇနီးသည်များ တခုသတိပြုစေချင်တာကတော့ … သိပ်ကြီးပူညံပူညံ မလုပ်မိကြရန်နှင့် အခန့်မသင့်ပါက
ကုမ္ပဏီက ရာထူးတိုးမပေးဘဲ ကိုယ့်ယောကျာင်္းက ရာထူးတိုးပေးလိုက်မှာကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြစေလိုပါသည်။
ကြားဖူးကြပေမည် … မင်းတုန်းမင်း မိဘုရားဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ရှိလဲဆိုတာ …. ယောကျာင်္းကောင်းမောင်းမတထောင် ဆိုစကားနှင့်ညီပါပေသည်။ မင်းတုံးမင်းကြီး၏ နန်းတွင်းဆေးတော်ကြီးကလဲနာမည်ကြီးလှပါပေသည်။ အဘယ်မျှနာမည်ကြီးသလဲဟူမူ …. ပါးစပ်ရာဇ၀င်အရ … မင်းတုံးမင်းကြီးမှီဝဲသောဆေးတော်ကြီးထဲ့သည့် ဘူးခွံသည်
ဆေးကုန်ရ်ျ လွှင့်ပြစ်လိုက်ပါက …ပုလင်းလွတ်သည် ဘယ်တော့မှလဲမသွားဘဲအမြဲထောင်လျှက်ပင်ရှိသည်ဟူ၏။
ကျနော့ဆိုလိုရင်းရောက်အောင်ကြိုးစားရ်ျချုပ်ပါမည်။ … ယခုခေတ်ယောကျာင်္းတို့သည် အံ့သြဘွယ်ကောင်းအောင်ပင် တလင်တမယားစံနစ်ကို ကျင့်သုံးကြပါသည်။
အင်မတန်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ကျင့်တရားပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။ ပူညံပူညံလုပ်တတ်သော ဇနီးသည်များကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းသည်။
တကယ်တန်းမှာမူ … မင်းတုန်းမင်းအပြီး သီပေါဘုရင်လက်ထက်ကစပြီး စုဖုရားလတ် လက်ချက်ကြာင့် တစ်လင်တစ်မယားစံနစ် အရိုးစွဲလာရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း မှတ်သား
ရပါသဖြင့် ……. စုဖုရားလတ်အား thank you ဟုဆိုသင့်လှပါကြောင်း …။
ဦးလေး ၀တုတ် အိမ်မှာ နားငြီးလာလို့ ဒီမှာ လာပေါက်ကွဲနေပြီနဲ့တူတယ်။ အိမ်ပြန်ရင် အိမ်က စုဖုရားလတ် အတွက် တခုခု လက်ထိုးဖို့ ၀ယ်သွားပြီး .. ငြိမ်းချမ်းရေး ယူလိုက်ပေါ့..
စုဖုရားလတ်ကို ကျေးဇူးတင်တာတော့ ဟုတ်ပါပီ..ရာထူးတိုးခံရတဲ့ ဇနီးသည်တွေကို ကျတော့ ဦးဖတ်တီးက တာဝန်ယူပေးမှာလား
April ရေ.. fatty ကို ဦးဖတ်တီးလို့ မခေါ်နဲ့… သူက `တ´ နဲ့ သတ်ရင် ဖတ်စာအုပ် မှာသုံးတဲ့ ဖတ် ဖြစ်တဲ့ အတွက် မှီငြမ်း ကိုးကားခြင်း ခံရမှာ ကြောက်ပါသည်။ `က´ နဲ့ သတ်ရင် ဖက်ရွက်ကဲ့သို့ ဖက်ကလေးကို ပေါ့ပါးပြီး လွယ်လွယ်ကူ ထုတ်ပိုး သယ်ယူ နိုင်ပါတယ်တဲ့။ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်တဲ့ လူနေမှု ဘ၀ အတွက် ဦးဖတ်တီးလို့ မပေါင်းဘဲ ဦးဖက်တီးလို့ ပေါင်းပါလို့ ဆူးကို ပြောဘူးတယ်။ ဆူးကတော့ ဦးလေး ၀တုတ်လို့ခေါ်တယ်။ ကြုံတုံး.. ဦးလေးဝတုတ် အစား ပြောပြလိုက်သည်။
ဟဲဟဲ … ထင်တဲ့အတိုင်း ရန်တော့ထောင်ချင်ပုံရတယ် ..အားနာကြလို့နေမှာ ….
အိမ်ပြန်ရင် အိမ်ကစုဖုရားလတ်ကို …လက်နဲ့မထိုးဖြစ်ကြောင်းပါ။
ရာထူးတိုးသွားရင် …. လခရောဘယ်လောက်တိုးမှာလဲလို့မေးလိုက်ပေါ့ ….။
တိုင်းပြည်များချမ်းသာပြီး.. ဗမာတွေအလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ..။ လစာလောက်ငှကြည့်ပါလား..။
အခုပဲကြည့်လေ..။ ငွေကြေးအဆင်ပြေတဲ့သူတွေများ… ၁။ ၂။ ၃။ ၄။တွေနဲ့..။
အဲဒီ… လက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာဓလေ့ထုံးတမ်းဥပဒေတွေ ခေတ်မှီအောင် ပြင်သင့်ပြီထင်ကြောင်းပါ..။
တစ်လင်တစ်မယားစနစ်ကိုတော့ကျင့်သုံးပါတယ် ဒါပေမဲ့ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက် အငယ်နှောင်းလေးတွေ ကြူတာရယ် … စပွန်ဆာပေးတာရယ် …. ။ အီစီကလီလုပ်တာရယ် … ။ မာဆတ်သွားတာရယ် … ပင်တိုင်ပန်းကုံးဆွတ်ရတာရယ်တွေအားလုံးပဲလုပ်တာမို့လား ။ မမိသေးချင်တော့ တစ်လင်တစ်မယားပေါ့…… မိတော့မှ အပြင်းပြေတွေ ၊ ခဏပါကွာဆိုတာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ် ။
(ယခုခေတ်ယောကျာင်္းတို့သည် အံ့သြဘွယ်ကောင်းအောင်ပင် တလင်တမယားစံနစ်ကို ကျင့်သုံးကြပါသည်။
အင်မတန်ကောင်းမွန်သောကိုယ်ကျင့်တရားပင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုချင်ပါသည်။ ပူညံပူညံလုပ်တတ်သော ဇနီးသည်များကျေးဇူးတင်ဖို့ကောင်းသည်။)………
ဦးဖက်တီး ယောင်ကျားတွေဖက်က ဘက်လိုက်ပြောနေတာလား ???
ကျုပ်တို့မြန်မာတွေ သင်ခန်းစာ မယူတတ်ပုံများတော့ ရှေးမင်းတွေလက်ထက်မျာ ဖအေတူမအေကွဲ မင်းသားတွေ ထီးလုနန်းလုလို့ တိုင်းပျက်ပြည်ပျက်ဖြစ်ခဲ့ရတာကို သင်ခန်းစာမယူတတ်ဘဲ နောက်တက်လာတဲ့ မင်းတွေက သူ့အရင်မင်းတွေထက် မိန်းမယူတဲ့နေရာမှာ ပိုသာဖို့ကြိုးစားတယ်။ အင်းလေ အခုလည်း အတူတူပါပဲ၊ မဆလခေတ် သွားလေသူ ဦးနေဝင်းခေတ် ထက်သာအောင် အခု နအဖက လုပ်နေတာပဲလေ။